currentnews – Ministry of Foreign Affairs
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes တို့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi participates in the video conferences of the 36th ASEAN Summit and ASEAN Leaders’ Special Session on Women’s Empowerment in the Digital Age
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင် Videoconferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း ကောင်စီအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရုံးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အာရှရေးရာဝန်ကြီး The Rt. Hon Nigel Adams MP တို့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Christian LECHERVY တို့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
Union Minister U Kyaw Tin participates in the High-level Video Conference on Belt and Road International Cooperation
ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမနိုင်ငံများ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ပါဝင်တက်ရောက်
Union Minister U Kyaw Tin participates in the Video Conference of the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting on COVID-19
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ-ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အထူးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms. Marianne Hagen တို့ တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း